စပါး huller စက်ကိုမည်သို့လည်ပတ်ရမည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ?
3.စပါးပေါက်ပြီးနောက်အင်ဂျင်စတင်, ၏ညှနျကွားထဲမှာရဟတ်လှည့်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ. ပထမမိနစ်အနည်းငယ်, လေ့လာရေးပုံမှန်မဟုတ်သောဆူညံသံရှိပါတယ်, ပုံမှန်စစ်ဆင်ရေးကိုအတည်ပြုပေးရန်, ထုတ်လုပ်မှုကိုအစာကျွေးနိုင်သည်.
4. စုဆောင်းရန်အရေခွံပါရှိသည်စပါးစေ့, လေဘွေသို့လေစီးဆင်းမှုကိုညှိနိုင်သည်, အဆိုပါစုတ်ယူခြင်းလေထုအသံအတိုးအကျယ်တိုးမြှင့်, အရေပြားစုပ်ယူ၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ.
6. ထုတ်လုပ်မှု, မော်တာ၏တုန်ခါမှုမှအဝေးမှလူများ, အနာမှရှောင်ရှားရန်.
7. ပစ္စည်းကိရိယာများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအညစ်အကြေးများနှင့်ကျန်ရှိသောစပါးနှင့်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရှင်းပစ်သင့်သည်. စပါး၏အာရုံစူးစိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေရန်. မသုံးသည့်အခါပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖုံးလွှမ်းထားရမည်, ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ဘဏ္Treာရေး၌တည်၏, နေနှင့်မိုးရွာခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်.
ဆန်စက်စက်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်များစွာအရေးပါသည်. အခု, အဓိကအားဖြင့်ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်အကြောင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောကြပါစို့။ ဆန်စက်ကပြောင်းဆန်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးဆန်ကြိတ်ခွဲခြင်းရဲ့အခြေခံအပိုင်းဖြစ်သည်။. ဆန်သန္ဓေသားနှင့်ဆန် endosperm သည်ပိုးအလွှာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်. ပြီးတော့ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်, ဆန်စက်နှင့်သန္ဓေသားတို့၏ endosperm ခွဲခြားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်. ကျနော်တို့ဆန်ဖွဲနုကိုဖယ်ရှားပါ, ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုဖွဲနုမရှိဘဲထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်, အရာပိုကောင်းတဲ့အရသာရှိပါတယ်. အပြင်, ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်အရည်အသွေးတိုးတက်လာသည်.